Odayaal dhaqameed ka soo jeeda beelaha degga Jubbaland ayaa cabasho u gudbiyay Dowladda… – Hagaag.com
Odayaal dhaqameed ka soo jeeda beelaha degga Jubbaland ayaa cabasho u gudbiyay Dowladda…
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya, General Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa gelinkii dambe ee Talaadadii Magaalada Muqdisho kula kulmay Odayaasha Dhaqanka iyo Siyaasiyiinta Jubbooyinka & Gedo ka soo jeeda, qaarkood.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa lagu sheegay in Odayaasha Dhaqanka ee beelaha iyo Siyaasiyiinta reer Jubbaland ay Wasiirka u soo gudbiyeen cabashooyin ka dhan ah dhismaha Dowlad Goboleedka Jubbaland.
“Odayaal dhaqameedka beelaha degga Jubbaland iyo Siyaasiinta ka soo jeeda deegaanadaas ayaa u gudbiyay Wasiirka Wasaaradda cabashooyin ku aaddan, sida ay ku dhisan tahay Dowlad Goboleedka Jubbaland. Sidoo kale waxaa ay cadeeyeen in aysan ku qanacsaneyn guud ahaan Maamulka Jubbaland, isla-markaana ay daneynayaan maamul lagu dhiso si wada ogal ah, damaanad qaadi kara nabadgelyadooda, isku haynta wadajirkooda iyo horumarkooda, shacabka ku dhaqan Jubbaland.”
Warka ayaa lagu sheegay in Wasiirka Arrimaha Gudaha uu Odayaasha Dhaqanka iyo Siyaasiyiinta deegaanada Jubbaland ka dhageystay cabashada ay ka yihiin Maamulka Jubbaland.
“Wasiir Mukhtaar ayaa ka dhageystay cabashooyinka ay soo gudbiyeeyn odayaasha beelaha degga deegaanada Jubbaland iyo siyaasiin ku wehliyay kulanka ay la qaateen Wasiirka.”
Warar madaxbannaan ayaa sheegaya in kulankan ay soo qaban-qaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, oo 22-kii bishii August ee sanadkii 2019 qaadacday doorashada dib loogu soo doortay Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Dowladda Federaalka ayaa dabayaaqadii bishii hore ee March soo xero gelisay Wasiirkii Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan), ka dib markii heshiis is afgaradka ah ay la gaartay, taasoona loo fasirtay mid culeys lagu saarayo Axmed Madoobe. Janan ayaana si dhow loola xiriirin jiray Hoggaamiyaha Jubbaland.
Kulankan ayaa imaanaya, iyadoo uu aad u xun yahay xiriirka iyo wada-shaqaynta Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedka Jubbaland, waana xilli Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada ay Magaalada Muqdisho u jooggaan shirka ay tahay in lagu dhameystiro hirgelinta doorashooyinka dalka.